Miguel Angel Buonarotti. Mavhesi ehunyanzvi uye mudetembi | Zvazvino Zvinyorwa
Miguel Ángel Buonarroti, naDaniele da Volterra. Guva raMichelangelo muChechi yeSanta Croce muFlorence.
Miguel Bungel Buonarroti, imwe yeakanyanya kugona kwepasirese, yapfuura munyasha dzisingaperi chaizvo muGuta Risingagumi zuva rakaita nhasi muna 1564. Ndiye chakanyanya exponent kubva pane runyorwa rurefu rwemapenzi aakapa Kuberekwa kweItaly. Dhizaini, pendi uye, pamusoro pezvose, muvezi, tAivewo nyanduri anokosheswa. Uye chiri muchinhu icho chandinoda kumurangarira neizvi ndima.
Nhaka yake yehunyanzvi haina kuenzaniswa. Hazvigoneke kuti usashamiswe naDavid wake, Pieta wake, Mosesi wake kana mifananidzo yakanakisa iri muSistine Chapel muVatican. Asi kungwara kwaMichelangelo T.Akabudirirawo munhetembo. Aive ane shungu uye nyanzvi mu Divine Comedy, ivo Dante, kwaakanyorera nhetembo. Akanyorawo mavhesi anorwadza achinyunyuta nebasa rinonetesa iro komisheni yekushongedza Sistine Chapel yaisanganisira.
Asi avo vaaida kwazvo rudo, runako, rufu, Mwari, hupenyu uye zvakare zvivi, pamwe nechinhu chero chipi zvacho chaireva mufaro uye mufaro. Mune yavo sonnets nyaya yakakurisa nderwe rudo neutauri hwePetrarchan hwemavara anorwadza, akasuwa uye anotambudzwa. Idzi ndidzo dzimwe dzadzo nedzimwe nhetembo.
Maziso angu, ruchiva rwezvinhu zvakanaka
mweya wangu uchishuva hutano hwako,
denga ngaritsvake, kutarisa izvo.
Kubva kune nyeredzi dzakakwirira
izvo zvinokurudzira kuvatevera
uye pano panonzi rudo.
Moyo hauwani zvirinani
muite kuti awire murudo, uye pisa uye kuraira
iwo maziso maviri akafanana nenyeredzi mbiri.
Haana iye muimbi mukuru kana pfungwa
kuti marombo pachawo haatenderedza
mukuwedzera kwayo, asi chete kune vakadaro pamusoro
ruoko runoteerera njere.
Zvakaipa zvandatiza uye nezvakanaka zvandinovimbisa,
mauri, akanaka, mwari, anozvikudza mukadzi,
matehwe akafanana; uye sei usingararamizve,
Zvikasadaro ndine hunyanzvi kune chaunoda.
Iyo haina, saka, Rudo kana runako rwako
kana kuomarara kana hupfumi kana kutsauka kukuru
mhosva yezvakaipa zvangu, ramangwana kana rombo rakanaka;
kana mumoyo mako rufu nenyasha
iwe tora nguva, yakaderera wit yangu
haizive, ichipisa, asi kuti itore rufu kubva ipapo.
Ndiri kuona nemaziso ako akanaka mwenje unotapira,
Izvo nemapofu angu handioni;
Ini ndinotakura netsoka dzako uremu, hwakasungirirwa,
Ndeupi wangu haisisiri tsika.
Ndinobhururuka nemapapiro enyu asina minhenga;
Uchenjeri hwako kudenga ndinogara ndichishuva;
Nekuda kwenyu ini ndachena uye ndakatsvuka,
Kutonhora muzuva, kudziya mune anotonhora mhute.
Murudo rwako mune zvangu chete,
Mifungo yangu mumoyo mako yakaitwa,
Mune mweya wako mune mazwi angu.
Sezvo mwedzi pachawo unoratidzika kwandiri kuva;
Izvo maziso edu mudenga achiona haazive
Asi izvo zvinovhenekera zuva.
mweya unosvika pamuviri wako
sengirozi yengoni izere kwazvo
iyo inoporesa njere uye inokudza nyika.
Zuva iro rinondipisa uye rinonditapa,
uye kwete chete chako chakanakisa kunze.
rudo irworwo haruna tariro muzvinhu zvinopfuura
kana kunaka kusingatonge maari.
Izvo zvinoenda kune yakakwira uye nyowani,
uko zvakasikwa zvinodhinda chitambi chayo uye
yakabatanidzwa kubva kudenga;
kana Mwari haazviratidze, nenyasha dzake, neimwe nzira
kupfuura mujira rinouraya uye rakanaka;
uye ini ndinomuda, iro zuva, nekuti rinoratidzwa maari.
Akaburuka kubva kudenga, uye atove mumunhu wenyama, mushure
ndiani akange aona gehena rakarurama uye anonamata,
ari mupenyu akadzoka kuzofungisisa Mwari,
kuti atipe chiedza chechokwadi chezvinhu zvese.
Nyeredzi inopenya, iyo nemaranzi ayo
akajekeswa, pasina chikonzero, dendere randakaberekerwa,
nyika yose yakaipa yaisazove mubairo kwaari;
Iwe chete, uyo wakazvisika, unogona kudaro.
YaDante ndinotaura, kunyatsozivikanwa kwake
mabasa anga ari evanhu vasina kuonga
izvo chete zvinongobvisa zvakanaka.
Ndinoshuva dai anga ari iye!
nekutapwa kwake kwakaomarara uye nekunaka kwake,
Ini ndaizopa chinzvimbo chinofadza kwazvo pasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhetembo » Miguel Ángel Buonarotti. Mavhesi ehunyanzvi uye mudetembi